You are at:Home»Activities»ဒုတိယအကွိမျ ဘငျးမျစတကျနိုငျငံမြား၏ ဒသေတှငျးလုံခွုံရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးပှဲ သို့တကျရောကျဆှေးနှေးခွငျး
By ThayNinGa on	 December 4, 2019 Activities, News
သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးသညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၂၇ ရကျမှ ၂၈ ရကျနအေ့ထိ အိန်ဒိယနိုငျငံ နယူးဒလေီမွို့ Vivekananda International Foundation (VIF) တှငျ ပွုလုပျသော ဒုတိယအကွိမျ ဘငျးမျစတကျနိုငျငံမြား၏ ဒသေတှငျးလုံခွုံရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးပှဲ (Second BIMSTEC Think Tank Dialogue on Regional Security) သို့ တကျရောကျကာ Maritime Domain Awareness: Myanmar’s Perspectives အားဆှေးနှေးခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါခရီးစဉျအတှငျး သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ (TISS) နှငျ့ Vivekananda International Foundation (VIF) တို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာ နားလညျမှုသဘောတူစာခြှနျလှာ (MoU on Cooperation) ကို TISS ၏ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးနှငျ့ VIF ၏ ဒါရိုကျတာ Dr. Arvand Gupta တို့ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ပါသညျ။
ဒုတိယအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများ၏ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ သို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ Vivekananda International Foundation (VIF) တွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများ၏ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ (Second BIMSTEC Think Tank Dialogue on Regional Security) သို့ တက်ရောက်ကာ Maritime Domain Awareness: Myanmar’s Perspectives အားဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ (TISS) နှင့် Vivekananda International Foundation (VIF) တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုသဘောတူစာချွန်လွှာ (MoU on Cooperation) ကို TISS ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးနှင့် VIF ၏ ဒါရိုက်တာ Dr. Arvand Gupta တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
Dr. Naing Swe Oo, Founder and Executive Director of Thayninga Institute for Strategic Studies, has participated in Second BIMSTEC Think Tank Dialogue on Regional Security organized by Vivekananda International Foundation (VIF) from November 27 to 28, 2019 held at VIF, New Delhi, India.
Memorandum of Understanding on Cooperation between Thayninga Institute for Strategic Studies (TISS) and Vivekananda International Foundation (VIF) was also signed.
Thayninga Institute for Strategic Studies